Posted by KhitMinnyo
This course is not available now. I'll make this future.
ယခု သင္ခန္းစာမ်ားကို မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ စီစဥ္ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ရတဲ့အခါ တင္ေပးသြားပါမယ္ခင္ဗ်။ လာေရာက္လည္ပတ္သူအေပါင္းကို ေက်းဇူးပါ
ယခု သင်ခန်းစာများကို မပြုလုပ်ရသေးပါ။ စီစဉ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး အချိန်ရတဲ့အခါ တင်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျ။ လာရောက်လည်ပတ်သူအပေါင်းကို ကျေးဇူးပါ
Bl@ck_b0x August 28, 2018 at 11:13 PM
U Chit Myo Oo June 14, 2019 at 9:03 AM
Anonymous August 9, 2019 at 6:47 AM
Anonymous September 7, 2019 at 2:25 AM
Unknown October 20, 2019 at 8:55 PM
ဒီအကြောင်းရေးရင် အချို့က ကောင်းကောင်းအမြင်ကပ်နိုင်မှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြုံတာများနေတာကြောင့်ရယ် တကယ့်ကို အစစ်အမှန် နားလည်နိုင်စေချင်တာရယ်ကြောင့် ဒီ Post လေးကို ရေးမိခြင်းပါ။ Hacking ကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါဆိုပြီး မကြာခဏ လာပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစု (99%) ရဲ့ နောက်ဆုံး လိုရင်းက Facebook Account ကို ဘယ်လို hack မလဲဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hacking ကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ သင်ပါရစေ လို့ ပြောလာသူတိုင်းကို လက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
စဆုံး ကြည့်ပြီး နားထောင်ပြီး တကယ်တမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှ လေ့လာပါ။ Facebook Account လေး အချောင်ရချင်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့တော့ Hacking ကို…
Hacking မှာမှ လူတွေကြား ပိုပြီး Popular ဖြစ်တာက Facebook လို လူမှုကွန်ယက် တွေနဲ့ online game တွေ ချိတ်ဆက်နိုင်သလို Facebook account တွေနဲ့ပါ ချိတ်နိုင်တဲ့ gmail ကို ပိုပြီး လူသိများလာကြပါတယ်။ Facebook hacking မှ hacking, gmail hacking မှ hacking လို့ ထင်လာကြသလို hacking လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့တင် Facebook နဲ့ Gmail account တွေကို hack တာလို့ ပြေးမြင်ကြတဲ့အထိ Hacking ကို နယ်မြေဘောင်ခတ်ပစ်လိုက်ကြတော့တာပါ။ Hacking နဲ့ အခြား နည်းပညာ နယ်ပယ်တွေမှာ အမြင်ကျယ်ချင်ရင်တော့ အဲသည် ခတ်ထားတဲ့ ဘောင်တွေကို ဖယ်ပစ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲသည်ဘောင်တွေကို မိမိဘာသာ ခတ်ပစ်လိုက်ကြတာကို မမေ့ပါနဲ့။ ဥပမာလေး ပြောကြည…